Mexico oo masaafurinaysa muhaajiriin xadka Maraykanka u talaabi raba - BBC News Somali
26 Nofembar 2018
Image caption koox muhaajiriinta ka tisan oo isku deyaya inay ka gudban xeyndabka
Dowladda Mexico ayaa sheegtay inay tarxiili doonto ku dhawaad 500 oo qof oo muhaajiriin kuwaasi oo isku deyay inay xog uga gudban xadka dalkaasi u la wadaago Maraykanka. War qoraal ah oo ka soo baxay sida wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ataa sidoo kale lagu sheegaya in dadka muhaajiriinta ay isku deyayeen in xadka uga talaabaan si sharci darro ah oo rabshadaysan.
Muqaal fiidiyoow ah oo laga soo duubay ayaa muujinaya tiro dad ah oo ay kamid yihiin dumar iyo caruur oo kusii ordaya xeyndaabka xadka labada dal ee u dhaw magaalada Tijuana.
Cidammada ilaalada xadka ee Mareykanka ayaa muhaajiriinta uu adeegsaday suntan dadka ka ilmeeysiisa.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Mexico ayaa sheegay in dhamaan dadka la aqoonsaday ee isku deyaayay inay xadka ka talaabaan la tarxiili doono sida ugu dhaqsiyaha badan.
Xisaadda ayaa sare u sii kacaysay tan iyo markii magaalada Tijuana ay soo gaaren kumanaan muhaajiriin ah horaanti bishan.
Dadka muhaajiriinta ah oo ka kala yimid dalalka bartamaha Amerika oo soo safray masaafo dhan 4 kun oo kiloomitir ayaa ku sugan magaalada Tijuana oo ku taala xadka Mareykanka uu la wadaago wadanka Mexico.
Image caption Cidammada ayaa muhaajiriinta uu adeegsaday sunta dadka ka ilmeeysiisa.
Dadkan ayaa waxaa ay shegeen inay ka soo carareen faqri, collaado iyo dhibaatooyinka taagan dalalka ay ka soo jeedaan oo o kala ah Honduras, Guatemala iyo El Salvador.
Muhaajiriintan ayaa haatan waxay wajahayaan xaalad adag, waxayna ka war sugayaan in codsiyadooda magangalyo ay aqbali doonto dowladda Maraykanka , iyadoona Madaxweyne Donald Trump uu wacad ku maray in cid walbo oo kamid ah muhaajiriinta uu ku reebi doono xadka Mexico ilaa inta Maxkammadaha ay go'aan ka gaarayaan kisaskooda, taa oo qaadan karto muddo bilooyin ah.
Dowladda Mareykanka ayaa waxaa ay ka digtay in qofkii lagu hela inuu si sharci darro ah kusoo galay Mareykanka la xiri doono, dibna loogu celi doona dalkiisa, hasyeshee dadkan ayaa waxaa ay shegeen inay yihiin dad noolal raadis ah, ayna doonayaan in msutaqbal wanaagsan ka helaan Mareykanka, halka qaar na ay doonayaan inay la midoobaan eheladooda oo Mareykanka ku nool.